घट्न थाल्यो कोरोनाको संक्रमण र मृत्युदर, निको हुँनेको संख्या बढ्दै - SangaloKhabar
काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट हुने दैनिक संक्रमण र मृत्युदर केही दिनयता घट्न थालेको छ। यससँगै निको हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर आइतबार ७ हजार ३ सय ६८ संक्रमित थपिएका छन्। यही अवधिमा १ सय ४५ जनाको मृत्यु भएको छ। ६ हजार ६ सय ४८ जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि शनिबार ८ हजार १ सय ६७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। १ सय ८७ जनाको ज्यान गएको थियो। ५ हजार ४ सय ५५ जना निको भएका थिए। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या १ लाख १० हजार २ सय ६३ पुगेको छ। मृतकको संख्या ५ हजार १ पुगेको छ। ३ लाख ३९ हजार ७ सय ५६ जना निको भएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले निषेधाज्ञामा कडाइका कारण संक्रमण र मृत्यु हुनेको संख्या घट्न थालेको बताए। ‘एक सातायताको तथ्यांक हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण र मृत्युदर घट्न थालेको छ’, प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गरेका कारण संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेको दर घट्न थालेको छ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले पछिल्लो एक साताको तथ्यांक केलाउँदा संक्रमणदरमा ह्वात्तै गिरावट नआए पनि घट्ने क्रम भने सुरु भएको बताए। उनका अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशमा संक्रमण र मृत्यु हुने दर घटेको छ भने अरु प्रदेशमा बढिरहेको छ। ‘हामीले सबै प्रदेश र जिल्लाको तथ्यांक केलाएका छौं। केही दिनयता संक्रमण र मृत्युदर घट्न थालेको छ’, उनले भने, ‘सहरमा संक्रमण कम भयो भने गाउँमा बढे पनि त्यसले समग्र तथ्यांकमा खासै फरक पार्दैन। तर, मृत्यु हुनेको संख्या भने घट्न केही समय लाग्छ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बिरामीले सहज रूपमा उपचार पाउन भन्नका लागि मन्त्रालयले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको बताए। – आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा यो खबर छापिएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ०३, २०७८ समय: ६:४७:५६